कान्छीको दिल्ली यात्राः जब गल्लीभित्रको कोठीमा शरीरसँग भारु साट्न थालिन्...... - Everest Dainik - News from Nepal
कान्छीको दिल्ली यात्राः जब गल्लीभित्रको कोठीमा शरीरसँग भारु साट्न थालिन्……
काठमाडौं, असोज १३ । बालकै देखिन्छिन् उनी । शरीरले किशोरावस्थाको आकार समेत लिइसकेको छैन । गहुँगोरो वर्ण, होचो कद र पातलो शरीर ! गामबेसी गर्दाको पहिरन ! फुंग उडेको मुहार ! बैंसालु उमेरमा आउनुपर्ने चमक छैन। माइती इन्डियाकी इन्चार्ज इन्दिरा पाण्डे र नेपाली जनसम्पर्क समिति, भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेको पहलमा कान्छी‐ नाम परिवर्तन । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जिबीरोडबाट हवाई मार्ग भएर नेपाल फर्काइँदै थिइन्।
असोज ६ गते दिउँसो नेपाल एयरलाइन्सबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रँदा उनका वृद्धावस्थाका बाबु पनि सँगै थिए । बाबुछोरीका मनभित्रका असन्तुष्टि मुहारमा झल्कन्थ्यो। उतै बसेर अझ पैसा कमाउने महत्वाकांक्षाले नछाडेकाले भनिन्, ‘फर्काएर के भो म फेरि गइहाल्छु !’ शरीर नेपालमा पुगिसक्दा कान्छीको मन दिल्लीमै थियो ।
मुख दिल्लीतर्फ मोड्न नछाड्दा माइती इन्डिया र प्रहरीले कान्छीलाई अब नेपाल नछाड्न कडा निर्देशन दिनुपरेको थियो। घरपरिवारकै सहयोगमा कान्छी दिल्ली पुगेकी थिइन्। बाबुले समेत रोकेका रहेनछन् कान्छीलाई। उल्टै सहयोगी भूमिका खेलेका रहेछन्।
कहिले विद्यालय नटेकेकी उनले अक्षर चिन्ने र लेख्न जान्ने कुरै भएन। तर, नुवाकोटको दुर्गम गाउँबाट दिल्लीको जिबीरोडस्थित गल्लीको कोठीसम्म पुगेको घटना उतिकै रोचक छ। भूकम्पबाट नुवाकोटस्थित कान्छीको घरसमेत भत्कियो । तीन दिनसम्म भत्किएको घरभित्र पुरिएकी उनकी आमाको जिउँदै उद्धार भयो। काठमाडौंमा उपचारका लागि ल्याउँदा कान्छी साथमा आइन् ।
याे पनि पढ्नुस बालिका बलात्कार गर्ने युवकलाई १२ वर्ष जेल
उपचारका क्रममा पैसाको कमी हुँदै गयो । होटलमा भाँडा माझ्ने काम गर्न थालिन् उनले। मासिक तीन हजार कमाइ हुन्थ्यो । दुई महिनामात्र भएको थियो उनले काम गरेको। कान्छीलाई एकजना महिलाले लोभ्याइन्।
ती महिलाले भारतमा काम गर्दा निकै पैसा कमाइने सुनाइन्। गरिबीले थिचिएकी कान्छी लोभिइन्। परिवारका सदस्यको सहयोगमा २०७२ सालको दसैंअगावै उनी सीमा काटिन। चिनेजानेका चारजना दिदीहरू उनको साथमा थिए। उनीहरूकै साथमा रक्सौलबाट रेल चढेर दिल्लीस्थित जिबी रोड पुर्याइयो कान्छीलाई।
यौनकर्मी बन्दा उनी किशोरावस्था पनि टेकेकी थिइनन् । कलिलै उमेरमा उनले जिबी रोडको गल्लीभित्रको कोठीमा शरीरसँग भारु साट्न थालिन्। कलिली भएकीले दिल्लीको यौनबजारमा उनको माग बढ्यो । विपन्न परिवारकी कान्छीका लागि त्यहाँको कमाइ ठूलै थियो । फर्कंदा उनले कानमा लगाएका सुनका मुन्द्रीले पनि कमाइ झल्कन्थ्यो। लस्करे सुन कानभर लगाएकी कान्छीले कमाइबाट निकै सुन खरिद गरेको सुनाइन्। केही सुन उद्धारका क्रममा प्रहरीले लुकाएको दाबी गरिन्।
उनी दिल्लीको कोठीमा मात्र सीमित भइनन्। मुम्बई र पुनासम्मको यौनबजारमा लगिन्थिन् कान्छी। जिबी रोडमा प्रतिदिन दुईदेखि पाँच हजार भारुसम्मको कमाइ हुने उनले सुनाइन् । दिल्लीबाहिर जाँदा त्योभन्दा बढी कमाइ हुन्थ्यो। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: Dilli, Rape